पूर्वमा स्रष्टा जमघट - साहित्य - नेपाल
इलाम चियाका लागि मात्रै होइन, साहित्यको रसास्वादनका लागि पनि प्रसिद्ध छ । उदाहरणका हो, इलाम साहित्य महोत्सव । ३ र ४ असोजमा हुने कार्यक्रममा साहित्य, संगीत, संस्कृति, राजनीति, आख्यान, सिनेमा तथा पर्यटनबारे चर्चा हुनेछ । काव्यिक मन बोकेर आउनेछिन्, कवि मोमिला जोशी, गौतम बुद्ध सभाहलमा । मानकमाथि प्रश्नको सामना गर्नेछन्, राजन मुकारुङ, मिश्र वैजयन्ती र उज्ज्वल प्रसाईले । यस्तै, सीमा आभास, कृष्ण धरावासी, सञ्जीव उप्रेती, प्रदीप गिरिलगायतका वक्ता हुनेछन्, छलफलमा ।
कार्यक्रममा 'अ' मा अल्झेको इलामबारे विशेष बहस हुनेछ । इलाममा अकबरे, अदुवा, अलैँची, अम्लिसो र ओलन गरी ५ 'अ' को खेती, उत्पादन र निर्यात अधिक छ । तर यसबारे बाहिरी जगत्ले उति चासो दिएजस्तो लाग्दैन । यस्तै, 'किन बिक्न छाड्यो ?' शीर्षकमा आख्यानबारे विमर्श गरिँदै छ । विश्वप्रकाश शर्मा र योगेश भट्टराई 'गणतन्त्र कसबाट खतरा ?' बारे बोल्दै छन् । गीतको दुःखमा गीत-संगीतबारे चर्चा हुँदै छ भने 'सिनेमा र सन्देश' मा नायिका स्वस्तिमा खड्का गफिनेछिन् । काव्य साँझमा दमदार प्रस्तुति दिनेछन्, स्रस्टाहरुले । पहाडी जिल्ला इलाममा साहित्यको रसास्वादन गर्न नजाने ?
ट्याग: नेपाल मण्डलइलाम साहित्य महोत्सव